2008 September | MoeMaKa Burmese News & Media
>How to watch MRTV effectively
> မြန်မာပြည်က MRTV ကို မီးကင်းစောင့်ခြင်း ရန်ကုန်က ရုပ်သံ ၀ါသနာအိုးတဦး စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ စစ်အစိုးရ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား (Military Radio and Television –...
> စတီးဝဲလ်လမ်း (Stilwell Road) သို့မဟုတ် လူတွေမသိသေးသည့် သမိုင်း ဥတ္တရမွန်း (ပြန်လည်ရေးသားသည်) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်လမ်းမကြီး (Burma Road) နှင့် လီဒိုလမ်း (Ledo Road)...
>Cartoon Beruma – Poor Burmese people can only keep their misery as their luxury
> Cartoon Beruma – Poor Burmese people can only keep their misery as their luxury September 29th 2008
>Ar Kar – Poem byastudent
> သွေး ချွေး မျက်ရည် တော်လှန်ရေး အာကာ ၂၀၀၇ သြဂုတ် ၂၇၊ ဗကသ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရ ကဗျာ စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ အကျပ်ကိုင်ခံရလွန်းလို့ ဇောချွေးစီးကြောင်း...
>Burmese public felt encouraged after U Win Tin released
> ဦးဝင်းတင်လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက် ပြည်သူလူထုကပါ ၀မ်းသာအားတက်ကြ ညွန့်ထွေး စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သာမန်ပြည်သူလူထုကြားထဲတွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက် စိတ်အား တက်ကြွနေကြပုံရသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ နေ့စဉ် အထွေအထွေ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်းများတွင်...
>Min Thu Wun
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၈)အမျိုးသားစာဆိုကြီး မင်းသုဝဏ်ထိန်လင်း စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ ဝါသနာတွေ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ရတာတွေ...
> ထောင်ဗူးပေါက်က မကြောက်တရား(ဦးဝင်းတင်သို့)မောင်စွမ်းရည်စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ထောင်ဗူးအဝင် ‘ဘူး’ခံဝင်ထောင်ဗူးကထွက် ‘ဘူး’ခံထွက်လက်လည်းမမြှောက် ဒူးမထောက်သေရမှာကို သူမကြောက်ချော့တာ မြှောက်တာ သူမမြောက်လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မျှတခြင်း ငြိမ်းချမ်းခြင်းသို့ သူလမ်းဖောက်ညီညွတ်ရေးကို သူတည်ဆောက်‘စု’က လမ်းခင်း၊ ‘ဝင်း’က လမ်းပြ ညီညွတ်ကြ...
> (photo:AFP) သူလိုလူ(ဦးဝင်းတင်သို့)မောင်စွမ်းရည် စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ သူနဲ့သူသာနှိုင်းစရာမို့သူသာ စံထူသူ့လိုလူကိုလူတိုင်းကြည်ညိုဆုတောင်းဆိုအံ့သူလိုလူတွေ များစေသော …သူလိုစိတ်ထား ပွားစေသော …သူ့သက် ရာကျော် ရှည်စေသော … ။ ။မောင်စွမ်းရည်စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂ဝဝ၈
>Cartoon Beruma – Gambari was sent to finish work but instead he returned himself finished
> Cartoon Beruma – Gambari was sent to finish work but instead he returned himself finished September, 29th 2008
>Saffron Revolution anniversary in Singapore
> စင်္ကာပူရောက်မြန်မာပြည်သားများ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်နေ့ ပြုလုပ်ကိုပေါစက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်းက စင်္ကာပူရောက် မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်လှုပ်ရှားမှုကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ သတိဝိပ္ပဿနာတရားရိပ်သာ (တပါးကျောင်း)တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သံဃာတော်များအား ဆွမ်း၊...
>MoeMaKa Radio Sydney Sept 28th 2008
> မိုးမခရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဆစ်ဒနီမြို့က ဂရုဏာအလှူပေးတဲ့တရား – သဲကုန်းဆရာတော် (ဦးပန်တျာ) သတင်းတိုထွာ ပထမပိုင်း ဦးနှောက်စားတဲ့ ကျော်ဟိန်း စင်္ကာပူက ရွှေမြန်မာပေးစာနဲ့ လူထုစိန်ဝင်းပြန်ကြားချက်...
>Mar Mar Aye 246
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၂၄၆) ဒေါ်မေရှင် အမှတ်တရ (၃) မာမာအေး စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အနုပညာလောကတွင် ထင်ရှားခဲ့သူ ဒေါ်မေရှင်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည့် တတိယမြောက်ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ မြကေခိုင်သီချင်း၊ ဒေါ်မေရှင်၊...
>Poem from Prison – To Anniverary of Student Union
> ဗကသ တနှစ်ပြည့် ထောင်ထဲက ကဗျာ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ အိုသူငယ်ချင်း … မင်းကလည်း တနေရာမှာ ငါကလည်း တနေရာမှာ ဒါပေမယ့် . . . ငါတို့တွေ...
> Cartoon Beruma – Veto power is superior than UN power, Ok ? September 27, 2008
> ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး တနှစ်ပြည့်တွင် အယ်လ်အေက မြန်မာများ ဒုလ္လဘရဟန်းခံ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားဒေသ၊ အယ်လ်အေမြို့ရောက် မြန်မာအမျိုးသား ၈ ဦးက ဓမ္မဇောတိကျောင်းတိုက်တွင်...
>China’s Tainted-Milk Crisis Grows
> တရုတ်ပြည်၏ အစာအဆိပ်သင့်မှု ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နယူးယောက်တိုင်းမ်စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ အဆိပ်သင့်စေသည့် မယ်လမင်း (Melamine) ပါဝင်သော တရုတ်ပြည်မှ ကလေးနို့မှုန့်နှင့် နွားနို့များကို ဈေးကွက်မှ ဖယ်ရှားပြီး နှစ်ပတ်အကြာတွင် အခြား အာရှနိုင်ငံများတွင်လည်း မယ်လမင်းအဆိပ်သင့်...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၉) အောင်ဝေး စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ‘ညဦးယံ၌ ငိုကြွေးခြင်းသည် လာ၍တည်းခို၏။ နံနက်ယံ၌ကား သီချင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏။’ (ဆာလံကျမ်း) မိုးမသောက် မှောင်မိုက်မပြေးမီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဧရာဝတီတိုင်းခရီးစဉ်။ မအူပင်ဆိပ်ကမ်းက ထွက်ခွာလာတဲ့ ‘မြတ်မေတ္တာ’သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ...
>recently released activists join NLD’s 20-year anniversary ceremony
> ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ဦးဝင်းတင်အဖွဲ့ချုပ် နှစ် ၂ဝ ပြည့် အခမ်းအနားတက်ရောက်ဓာတ်ပုံသတင်းစက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂ဝဝ၈ ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်သည့် နှစ် ၂ဝ ပြည့်နေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များ၊...
>San Francisco remembers Saffron Revolution One year later
> ဆန်ဖရန်စစ္စကိုက ရွှေဝါရောင် ၁ နှစ်ပြည့်ကို ယူနီယံရင်ပြင်တွင် ကျင်းပ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၂၆ ညနေခင်း၊ အမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တွင် မြန်မာမိသားစုများနှင့်...
>Saffron Revolution One Year Later – Photos in Memories
> Saffron Revolution One Year Later – Photos in MemoriesSeptember 27th 2008